'Nwoke Na-enweghị Ihe Nile' bụ Ihe Nkịtị Na-adịghị Egwu Na-adịghị Egwu
Mbido Ihe nkiri egwuGụgharia MoviesHBO (ihe nkiri) 'Nwoke Na-enweghị Ihe Nile' bụ Ihe Nkịtị Na-adịghị Egwu Na-adịghị Egwu
by Waylon Jọdan July 18, 2021
by Waylon Jọdan July 18, 2021 4,759 echiche
David tupu Nwoke efu ejiri nwayọọ nwayọọ weghaara ịntanetị, ọ bụghị n'adịghị ka ihe nkiri ahụ dị egwu. Otu ụbọchị, amaghị m ihe ọ bụ. Nke na-esote, amalitere m ịkọwa aha ebe a na ebe ahụ. Ugbu a? Ọ dị ebe niile.
Otu n'ime fim ikpeazụ nke Fox mepụtara tupu Disney azụta ya, Nwoke efu dabere na akwụkwọ ihe nkiri nke Cullen Bunn na kpakpando James Badge Dale dị ka James Lasombra, onye bụbu onye uwe ojii na-achọgharị nwa ada agbata obi ya na-efu efu. Nchọgharị ya na-eburu ya n'ime ebumnuche nzuzo dị iche iche n'ịkpọkọta otu mmụọ nke na-ada ụda dị ka akụkọ obodo mepere emepe nke sitere n'ike mmụọ nsọ Mgbanaka na ihe nkiri yiri ya na mbido.
“N’abalị mbụ unu nụrụ ya. N'abalị nke abụọ ị hụrụ ya. N'abalị nke atọ ọ hụrụ gị, "ka ha na-ekwu, na-edozi usoro iheomume maka ihe nkiri na onye na-akwado ya ka ọ na-abịarukwu eziokwu ahụ nso.
Dale na-eduga na ndị nwere aka Nwoke efu, gụnyere Marin Ireland (Umbrella Academy(Sasha Frolova)Red Sparrow(Robert Aramayo)Ụmụ anụmanụ anụ ọhịa(Ron Canada)Ahụhụ Mmadụ), na Stephen Root (Ogwe Office), Ma ihe nkiri ahụ na-adị ndụ ma nwụọ site na arụmọrụ ya. Ọ dabara nke ọma, onye na-eme ihe nkiri nwere ikike ịdọpụ ya.
Lasombra ya bu onye obula anyi choro ka anyi banye n’ime onodu di oke njo ma dikwa egwu nye anyi dika ndi n’ile. O nwere ọgụgụ isi, nwee obi ọkụ, ma na-agbasakwa n'ụzọ niile ziri ezi. Anyị na-eche nkụda mmụọ ya, ọchịchọ ịmata ya, na ngwụcha iwe ya na ụjọ ya.
Ihe m kacha hụ n'anya banyere ihe nkiri a bụ ihe jikọrọ ya na nke kachasị esere m. Nke a bụ ọmarịcha ihe nkiri na-adịghị nwayọ ọkụ nke na-ewe oge iji wulite ọgba aghara na ikuku. Tupu na ndị nkedo ya gosipụtara ugboro ugboro na ọ bụghị naanị ihe ị hụrụ, mana ihe ị na - enweghị ike, nwere ike imerụ gị ahụ. Ha na-eme ya nke ọma nke na ọbụna obere ihe nwere ike iwepụ onye na-ekiri ya, ma mgbe ibu, ọtụtụ ụjọ na-eche ihu na-eme, ha ga-etinye obi gị n'ịgba ọsọ.
Ọzọkwa, ha na-adabere n'okporo ụzọ egwu dị egwu n'ụzọ ziri ezi. Echiche nke otu ndị na-eme omume ọjọọ bụ nke ejirila ma mee ihe n'ụzọ na-atụ ụjọ, yabụ ọ dị mma ịhụ ihe nkiri na-ewere trope maka ihe ọ bụ wee jiri ya rụọ ọrụ nke ọma iji wuo paranoia na onye na-akwado ya na na ya ndị na-ege ntị.
Nye ka ị ga-atụkwasị obi na ndụ gị? Nye ka ị maara n’ezie? Karịsịa, Kedu ị maara n’ezie banyere onwe gị na ndị gbara gị gburugburu n’ezie?
James Badge Dale na-enye ọmarịcha arụmọrụ na Nwoke Na-enweghị Efu
Nwoke efu na-atụgharị uche n'echiche ndị a ugboro ugboro, na-akpasu ha iwe ma na-emesi nsogbu nke ndị na-ege ihe nkiri ahụ ike mgbe ha na-eji ndị ọkachamara na-erigbu ihe odide nke mmebi iwu nke Jacques Derrida yana echiche nke Nietzsche. Anyị nwere ike igwu n'ihu n'ime isiokwu ndị a - Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ekwu banyere aha Pontifex Group na James Lasombra – mana na ịme nke a, anyị ga-abịarute nke ọma ịda maka otu ihe egwu ahụ nke na-eyi egwu ịlaghachi na fim ahụ.
Dị ka ihe niile, Nwoke efu dị oke egwu na ọ na-agba ogologo oge niile. Dịka ndị nyocha, a na-akatọkarị anyị maka ikwu maka ịmegharị na idezi okwu n'enyeghị ihe atụ siri ike. N'ụzọ dị mma, nke ahụ abụghị ikpe ebe a.
Enwere akụkụ dum na mbido ihe nkiri a metụtara echiche nke Nwoke efu na mba ọzọ yana ndị ọzọ. Anyị na-enweta akụkọ zuru oke n'ihe dị ka nkeji 15 ruo 20 nke a na-akpọtụrụ aha na fim ahụ. E nwere ike ịbelata atụmatụ a niile, na-ebelata ihe nkiri oge a ruo n'okpuru akara aka elekere abụọ, ma na-eme ka akụkọ siri ike, na-elekwasị anya.
Ọ dabara nke ọma, ọbụnadị nke a enweghị ike ibibi ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha nnukwu ihe nkiri nwere ụjọ ziri ezi yana nkwubi okwu na-enweghị nkasi obi n'ụzọ niile kachasị mma. Nwoke efu na-aga ugbu a HBO Max ma odikwa iji gbazite na nyiwe dijital ndi ozo.
Lelee ụgbọala na-adọkpụ n'okpuru, ma mee ka anyị mara ma ị hụla fim ahụ na nkwupụta!